Mpampiasa iray mampiseho antsika ny mety ho GarageBand | Vaovao IPhone
Imbetsaka izahay no nampianatra anao ny fomba fampiasana fitaovana iOS amin'ny zavatra marobe, ao anatin'izany ny dmilalao mozika amin'ireo rindranasa efa misy ianao ao amin'ny App Store. Na dia efa ela be aza tsy ahitantsika talenta vaovao amin'ny Internet, mpampiasa YouTube iray dia nandefa horonan-tsary roa tao amin'ny fantsony namela ny vavany hisokatra.
Mitendry amponga ny mpampiasa fa ao an-trano kosa tsy afaka manana izany izy ireo, amin'ny ankapobeny dia noho ny tsy fanelingelenana ireo mpifanolo-bodirindrina sy tsy fahampian'ny toerana. Satria misy foana ny vahaolana amin'ny filàna dia naka ny iPad-ny ity mpampiasa ity, nisintona ilay rindranasa Apple GarageBand sy Drums XD ary nanohy naneho an'izao tontolo izao ny zavatra azon'izy ireo atao raha ampiasaina tsara.
Ho fanampin'ny fampiasana ny iPad anao, ny iPhone 6 Plus koa no maherifo amin'ny iray amin'ireo lahatsariny. Mazava ho azy fa ny haben'ny efijery kely kokoa dia manasarotra ny fampiasana ny rindranasa, saingy ny valiny dia miavaka. Mazava ho azy, toa tsy misy banga ao an-tranonao ianao na dia tsy manana bateria ao an-tranonao aza ianao.
Ahoana ny momba ireo fampiharana? GarageBand dia fantatry ny rehetra satria manolotra azy maimaim-poana ao amin'ny App Store aza i Apple. Drums XD dia safidy tsara hafa ho an'ireo izay te-hanamboatra amponga ampiasainy manokana, afaka misafidy ny habeny sy ny toeran'ny zavamaneno rehetra mba hitovy amin'ny tadiavintsika. Amin'ity tranga ity dia 6,99 euro ny vidiny saingy misy kinova maimaimpoana ho an'ireo izay te hanandrana.
Mazava fa tsy mila ny fahaiza-manao ilaina isika fanofanana sy famerenana ora maro hatramin'ny haavon'ity mpampiasa YouTube ity
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Fampiharana iPhone » Mampiseho anay ny mety ho an'ny GarageBand ny mpampiasa raha manana tanana tsara ianao
Ahoana ny fahafantarana ny ora bateria navelanao tao amin'ny iOS 8